Kongareeska Paraguay oo la gubay - BBC News Somali
Kongareeska Paraguay oo la gubay
1 Abriil 2017
Image caption Dad caraysan oo gubay Kongareeska
Dad banaan baxayey ayaa dab qabadsiiyey kongareeska Paraguay, ayadoo ay soconayeen mudaaraadyo rabshado wata oo lagu diiddan yahay xeer madaxweynaha u saamaxaya in uu mar kale doorasho u istaago.
Dadka banaan baxayay ayaa xarunta gudaha u galay, ayagoo jabiyey daaqadihii iyo gidaarkii xayndaabka xaruntaas ku taalla magaalada Asuncion habeennimadii Jimcaha, ka dibna dab qabadsiiyey.
Dastuurka dalka ee la qaatay 1992 ayaa wuxuu ahaa mid la soo rogay ka dib 35 sano oo kali-talisnimo ay jirtay, wuxuuna si adag xudduud ugu yeelay in 5 sano oo kaliya oo hal mar ah uu madaxwaynuhu xafiiska hayn karo.
Image caption Boolis fardo saaran oo dadka kala eryaya
Laakinse madaxweynaha iminka talada haya Horactio Cartes ayaa isku dayaya in xudduudaas meesha laga saaro oo uu mar kale doorasho galo.
Wakaaladda wararka AFP ayaa ku soo warrantay in mudaaharaadayaashu ay jajabiyeen xafiisyada mudanayaasha xeerka taageeray.
Booliska oo adeegsanaya rasaasta cinjirka ka samaysan iyo biyo xoog leh ayaa kala eryey dadkii mudaaharaadayey. Warbaahinta maxalliga waxay sheegaysaa in tobanaan qof ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo ay ku jiraan dadkii banaan baxayey, boolis, iyo siyaasiyiin.
Hadal af-Isbaanish ku qornaa oo uu soo dhigay bartiisa Twitter ayuu madaxweyne Cartes ku yiri "Dimuqaraadiyadda laguma qabsan karo, lagumana difaaci karo qas, waxaadna hubtaan in xukuumaddan ay sii wadi doonto dadaalka ay ugu jirto in nidaamka jamhuuriyaddan ka jira uu sii socdo".
Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa isna sheegay inuu il gaar ah kula socdo waxa dhacaya oo baaritaan uu ku samayn doono rabshadaha.
Goor sii horreysay ayey dadka caraysan u soo bexeen jidadka ka dib markii ay kulan yeesheen 25 senetar oo ansixiyey xeerkan wax looga beddelayo dastuurka, kuwaasoo tiro ahaan noqonaya aqlabiyad aan aad u badnayn.
Image caption Dad ku mudaaharaadaya dibadda Kongareeska
Xeerkan ayey tahay in uu ansixiyo aqalka kale ee Baarlamaanka - aqalka mudanayaasha - halkaasoo ay ku xooggan yihiin xubnaha xisbiga madaxweyne Cartes.
Mucaaradka ayaa sheegaya in xeerkan uu wiiqayo hay'adaha dimuqaraadiga ah.
Desiree Masi oo ka tirsan mucaaradka Senetka ayaa yiri "Inqilaab ayaa la sameeyey. Waa ka soo hor jeesanaynaa, dadkana waxaan ku marti qaadaynaa inay nagala soo hor jeestaan".
Paraguay waxaa intii u dhaxaysay 1954 - 1989 xukumayey Jeneraal Alfredo Stroessner oo xukunka ku qabsaday af-gambi.
Image caption Booliska oo rasaas cinjir ka samaysan ridaya
Dastuurka cusub ee dalka oo la sameeyey 1992 ayaa abuuray xukuumad casri ah, laakinse waxaa dalka soo maray wakhti dheer oo uu ku jiray degenaansho la'aan siyaasadeed, dagaallo ka dhex jiray xisbiyada gudahooda, iyo isku day af-gambi.
Wakhtiga uu madaxweyne Cartes xafiiska haynayo ayaa ku eg 2018, haddii is-beddelka la ansixiyana, wuxuu sidoo kale u ogolaanayaa madaxweynihii hore Fernando Lugo inuu mar kale tartan galo.